आफैँले जग्गा किनेर घर बनाउन... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडाैं पुस ३
मानिसहरु आफ्नै जीवनकालमा एउटा घर बनाउने सबैको लक्ष्य हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा घर जग्गाको भाउ एकैपटक आकासिदाँ अहिले मध्यम वर्गिय परिवारले उपत्यकामा तलवी कमाइले घर बनाउन मुस्किल भएको छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा आफ्नै जग्गा किनेर घर बनाउने भन्दा पनि अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङमा पनि उत्तम विकल्पको रुपमा आएको छ ।
आफैँले जग्गा किनेर घर बनाउन सजिलो कि हाउजिङ किनेर बस्न सुविधा ? आफैले घर बनाउँदा घर बलियो कि डेभलपर्सबाट घर बनाउँदा बलियो ? यसै विषयमा हामीले रियलिटी डेभलपर्सका अध्यक्ष भगवान केसीसँग कुराकानी गरेका थियौ‌ । केसीसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंशः
उपत्यकामा जग्गा किनेर घर बनाउन ठिक कि हाउजिङको घर किन्न ठिक ?
मानिसको व्यस्ततासँगै आफैँले घर बनाउने फुर्सद कम हुदैँ गएको बेलामा अहिले उपभोक्तहरुमा आफैँ जग्गा किनेर घर बनाउने भन्दा अपार्टमेन्ट वा हाउजिङमा बस्ने भन्ने चर्चा चलेको छ ।
भुकम्पको अघि मानिसहरुमा अपार्टमेन्टमा बस्ने एक प्रकारको क्रेज थियो । मानिसहरु आफू बसिरहेको घर बेचेर अपार्टमेन्ट किनेको पनि देखियो । तर भुकम्पपछि यसमा केही सुस्तता आएको छ ।
उपत्यकामो मध्यम वर्गको परिवारको लागि आफैँले घर बनाएर बस्न सस्तो पर्छ। किनभने,अहिले सामान्यतया २ हजार वर्ग फिटको एक तले घर बनाउँदा प्रति वर्ग फिटको खर्च ३५ सय देखि ४ हजार सम्म पर्छ । तर त्यहि क्षेत्रफलको हाउजिङ बनाउँदा भने ६ हजार भन्दा बढी खर्च पर्न जान्छ ।
घर भन्दा हाउजिङ किन महँगो हुन्छ ?
हाउजिङमा लगाएको करका कारणले पनि हाउजिङ महँगो भएको हो । किन भने त्यो त व्यवसाय हो । त्यो कर फेरि व्यवसायीले आफूले तिर्ने होइन घरको मूल्यबाट उठाउने हो । त्यसैले पनि त्यो महँगो हुन्छ । व्यक्तिगत घरमा उपभोक्ता आफैले बनाउदा कर लाग्दैन । त्यसको तल्लादेखि घरको रंग पनि छान्न पाउछ त्यसैले पनि त्यो राम्रो हुन्छ ।
त्यो सँगै हाउजिङमा बस्दा त्यहाँको समुदाय अनुसार सुरक्षा लगायतका सुविधा सँगै अन्य खर्च पनि जोडिन्छ। त्यसले खर्च बढाउ । तर, हाउजिङमा बस्दा महङ्गो मात्रै होइन सुविधा पनि बढी हुन्छ । त्यहाँ घरायसी सामान्य समस्याको चिन्ता लिनु पर्दैन त्यो समाजले नै हेर्छ ।
कस्तो अवस्थामा हाउजिङमा राम्रो हुन्छ ?
जो मान्छे अलिकति सम्पन्न छन्, जो विदेश बाट फर्केका छन् र नेपालमा घर बनाएर बस्ने इच्छा छ भने उनीहरुको लागि व्यक्तिगत घर भन्दा हाउजिङ राम्रो हुन्छ ।
हाउजिङ वा अपार्टमेन्टमा बस्दा त्यहाँका घरायसी समस्या हुदैनन् । जस्तै घरमा बस्दा त्यहाँ पानीदेखि सुरक्षा तथा घरका सानासाना कुराहरुले समस्या दिइरहेको हुन्छ। बस्दा घरको कुनै व्यक्तिगत समस्या हुदैँन ।
अपार्टमेन्ट राम्रो विकल्प हो ?
नेपालमा १० वर्ष अघि देखि हाइराज वा अपार्टमेन्छ विल्डिङको चलन सुरु भयो। मानिसको माग पनि निकै थियो। तर भुकम्प पछि भने अहिले अपार्टमेन्टमा मानिसको आर्कषण कम देखिएको छ ।
तर पनि अहिले सामान्य अपार्टमेन्टलाई प्रति वर्ग फिट ६ हजार भन्दा माथि पर्छ । त्यसैले त्यो पनि आफैँले घर बनाउनु भन्दा महङ्गो हुन्छ । त्यस्तै, आफूले बनाएको घर भए घर भत्केपनि जग्गा बाँकी रहन्छ तर अपार्टमेन्टको हकमा भने अपार्टमेन्ट भत्केपछि आफ्नो के बाँकी हुन्छ भन्ने अन्यौलले गर्दा पनि मानिसहरु अपार्टमेन्टमा मान्छेको इच्छा देखिएन। यो नितिगत अस्प्रस्टताले गर्दा पनि मानिसहरुको अपार्टमेन्टमा आर्कषण देखिएको छैन ।
भुकम्प पछि धेरै अपार्टमेन्ट बनाउने कम्पनी पनि हाउजिङतिर आएका छन् । अहिले हाउजिङ बन्ने बित्तीकै हुदाँ पनि उनीहरुको आर्कषण बढेको छ । तर अपार्टमेन्ट अझै नबिकेर खालि छन् ।
पछिल्लो समय डेभलपर्सले बनाएको घर कमजोर हुन्छन् भन्ने चर्चा गरिन्छ के व्यक्तिले बनाउने घर भन्दा डेभलपर्सले बनाउने घर कमजोर हुन्छ ?
व्यक्तिले बनाउने घरमा इन्जिनियरले नक्सा पास गर्छ तर सुपरभिजन गर्दैन । हामीले घर बनाउँदा एउटा प्रकृयामा रहेर बनाइन्छ । घर बनाउँदा हामी इन्जिनियरको सल्लाहमा उनीहरुको डिजाइन अनुसार बनाउने हो । कुनै पनि डेभलपर्सले घर निमार्णको सुरुवात माटोको परीक्षणबाट गरिन्छ । हामी माटोको परीक्षण गरेर सोहि अनुसारको घरको डिजाइन गछौं ।
अहिले भुकम्प पछिको अवस्थामा सरकारले पनि एउटा मापदण्ड बनाएको छ । सोही अनुसार पिल्लर र भित्ताको मोटाइ बनाइन्छ । तर, आफैँ घर बनाउदाँ इन्जिनियरलाई घरको नक्सा बनाउन मात्रै दिने हो ।
घरको डिजाइनदेखि हरेक कुरा सबै कुरा आफैले छानिनेर बनाइन्छ। यसो गर्दा जति बेला घरमा समस्या आउछ अनि आफैले घर बनाएकाहरु पछुताउने गरेको देखिन्छ। हाउजिङले बनाएका घरमा इन्जिनियरिङको सबै कुरा हुन्छ ।
एउटा उदाहारण हेरौ न, हामी प्राय घरको पिल्लर ठूलो छ भने बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, त्यसको बलियोपन रडको बधाइमा पनि भर पर्छ । सधैँ मोटो पिल्लर मात्रै बलियो हुदैन ।
हाउजिङले बनाएको घरमा त्यो समस्या हुदैन किनकि त्यहाँ आफ्नै इन्जिनियर हुन्छ र घरको हरेक अवस्था उसले हेरिरहेको हुन्छ । कहिलेकाँही फिनिसिङमा केही समस्या हुन्छ । कहिलेकाँही साना तिना क्यार्कहरु पनि देखिन सक्छ । त्यस्तो सामान्य गडबडी भए पनि सामान्य मानिसले बनाएको घर भन्दा आफैँले बनाएको घर बलियो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस ३, २०७६, ०६:०७:००